About Us - Cixi Fujing Plastic Products Factory
Cixi Fujing Plastic Products Factory yasekwa ngo-1990, umenzi yobungcali kwi-R & D, ukuvelisa nokuthengisa okucoca ezahlukeneyo umdiza. Ngoku uye umthengisi inkulu okucoca umdiza ngeplastiki aye athunyelwa eJapan, eMelika, eYurophu, kuMbindi Mpuma, mpuma Asia njl brand zethu ezithengisa ngezityalo "Joyo" yeyona idumileyo China.
Fujing ibekwe Cixi umzi yemoto elula kakhulu. Kuthatha ngaphantsi kweeyure ezimbini ukuya moya ezintathu ezinkulu (Ningbo, Hangzhou, Shanghai) e-China East.
Fujing lujolise ukonga impilo abatshayayo 'ubomi. Siza kuseka i "neCuba Ulawulo Research Centre" e Shanghai kunye neeyunivesithi kunye namaziko ophando 2000.Our amacebo uyakwazi ukususa abangaphezu kwe-90% inicotine, tar kunye nezinye izinto ziyityhefu kwaye kuyingozi ukusuka icuba.
Fujing has uthotho oomatshini, kuquka Wahlanganisa ke, iyalungisa, uvavanyo, ukupakisha uphawu. ireyithi imveliso ezenzekelayo kwama-90% leyo egcina iimveliso zethu ngomsebenzi ogqwesileyo iindleko. Fujing nayo ngabokuqala ukuba iklasi lamawaka ishumi uthuli-ezamahala yocweyo e China.
Fujing ngokunyanisekileyo yamkela OEM wakho / ODM okanye nayiphi na imfuneko. sisoloko sikulungele ukunika arcade inkonzo ekumgangatho ophezulu iimveliso.